Qorshee Su'aalaha inta Badan La Weydiiyo - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorsheyso Su'aalaha
Su'aalo ayaad qabtaa Waxaan helnay jawaabo.
Caafimaadka Apple 101
Medicaid waxay bixisaa daryeel caafimaad dadka buuxiya shuruudaha dakhliga federaalka. Medicaid waa magaca federaalka ee barnaamijka, halka Caafimaadka Apple waa waxa Medicaid loogu yeero gobolka Washington.
Adiga oo ah qofka Apple Health qaataha ah, waxaad xaq u leedahay inaad doorato caymiska caafimaadka ee ka shaqeeya dantaada ugu fiican. Fahamka xulashooyinkaaga, kharashyadaada, iyo dheefahaaga ayaa wax weyn ka beddeli kara tayada daryeelkaaga.
Liiska hubinta macaamiisha: waxa laga raadinayo qorshaha Apple Health
Way adkaan kartaa in la helo caymis daboolaya baahiyahaaga daryeelka caafimaad. Tixgeli sifooyinka soo socda markaad wax u iibsaneyso caymiska Apple Health:
Faa'iidooyinka la Bixiyo - Hubi in qorshuhu daboolayo adeegyada daryeelka caafimaadka iyo daawooyinka aad u baahan tahay. Qorshayaasha Apple Health waa inay buuxiyaan heerar cayiman, laakiin dhammaantood iskumid ma aha.
Shabakada Bixiyaha - Soo ogow haddii takhtarkaagu aqbalo nooca caymiska aad ku fikireyso inaad hesho. Hubi shabakadeena bixiyaha.
Faa'iidooyin Dheeraad ah - Shirkado badan oo caymis, oo ay ku jiraan CHPW, ayaa bixiya barnaamijyo iyo adeegyo dheeri ah oo aan lacag ku fadhiyin xubnaha. Waxaan ugu darnay adeegyadan si aan u maalgashano xubnaheenna caafimaadka muddada dheer. U fiirso waxa aad heli karto ee ka baxsan caymiskaaga aasaasiga ah.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Medicaid iyo Apple Health?
Medicaid iyo Apple Health waa magacyo isku barnaamij ah. Caafimaadka Apple waa waxa loo yaqaan Medicaid ee gobolka Washington.
Waa maxay Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW)?
CHPW waa qorshe caymis caafimaad oo aan macaash doon ahayn. Waxaan la shaqeyneynaa gobolka si aan u siino qorshooyinka daryeelka caafimaadka Apple Health (Medicaid) iyo dadka qaata Medicare. Waxaan bixinaa daryeel aad u fiican, iyo sidoo kale faa'iidooyin badan oo aysan daboolin Apple Health oo keliya.
Caymiska CHPW wax kharash ah miyaa?
Haddii aad u leedahay caymiska CHPW Apple Health shaqsi ahaan, Ceymiska Medicare Dual caymiska, ama caymiska Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Kaliya (BHSO), adeegyada la daboolay iyo barnaamijyada lagu bixiyo shabakadda dhexdeeda waxba kaa qaadi maayo.
Ilaa dhakhtarkaaga shabakadu ogolaado daryeelka mooyee adiga adeeg bixiye ka baxsan shabakadeena, waxay u badan tahay inaad bixiso kharashka adeegyada la bixiyo oo dhan.
Haddii ilmahaagu leeyahay caynsanaanta Apple Health ee Kids, waxaad bixin kartaa qaddar yar bishii. Haddii aad bixiso ama aanad bixin waxay ku xidhan tahay dakhligaaga. Hubi shuruudaha dakhliga loogu talagalay Apple Health ee carruurta.
Waxaan qabaa su'aalo ku saabsan caymiska CHPW.
CHPW miyey ku bixisaa qorshayaal meesha aan ku noolahay?
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington wuxuu bixiyaa caymiska Apple Health (Medicaid). ALL degmooyinka Gobolka Washington.
Maxay yihiin noocyada kala duwan ee qorshooyinka iyo xaddidaadda shabakadda?
dhaqanka HMOs (Ururada Dayactirka Caafimaadka) iyo EPO-yada (Ururada Bixiyaha Gaarka ah) ayaa u diidi kara caymiska bixiyeyaasha ka baxsan shabakadooda. Tani waxay u oggolaanaysaa inay hoos u dhigaan khidmadahooda hoose ee noocyada kale ee qorshooyinka ah. Ilaa dhakhtarkaaga shabakadu uu kuu oggolaado daryeelka adiga mooyaane adeeg bixiye ka baxsan shabakadeena, waxay u badan tahay inaad bixiso kharashka adeegyada la bixiyo oo dhan.
CHPW waa HMO. Waxaan ku faraxsanahay shabakadeena guud ahaan gobolka Washington iyo daryeelka ay siiyaan xubnaheena.
PPO-yada (Ururada Bixiyaha La Doorbiday) ama POS-yada (Qorshayaasha Adeeg-Bixinta) waxay ku siinayaan ikhtiyaarka aad ku heli karto daryeel gudaha ama dibedda shabakadda adeeg bixiyaha, in kasta oo kharashyada badanaa ay badan yihiin haddii daryeelku ka baxsan yahay shabakadda.
FFS-yada (Qorshayaasha Ujrada-Adeeg) inta badan ma laha shabakado. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad arki karto dhakhtar kasta oo aad dooratid, laakiin waxaa laga yaabaa inaad bixiso wax badan oo aad buuxiso waraaqo dheeri ah.
Haddii aan isqoro CHPW, miyaan awoodi doonaa inaan la kulmo dhakhtarkayga?
Waxaan qandaraas kula jirnaa in ka badan 2,700 bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah iyo in ka badan 14,700 khabiiro caafimaad.
Si aad u ogaato haddii dhakhtarkaagu hadda ku jiro shabakadda bixiyaha CHPW, raadi annaga buugga internetka. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa wac Adeegga Macaamiisha CHPW, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Waa maxay faraqa u dhexeeya qorshaha caadiga ah ee CHPW Apple Health iyo qorshaha Apple Health BHSO?
Haddii aad hore ugu lahayd caymis caafimaad barnaamij kale, sida Medicare, Health Qabiil, ama Daryeel Korinta, waxaad heli kartaa caymis dheeraad ah kaliya caafimaadka dhimirka iyo adeegyada ciladaha isticmaalka muqaadaraadka iyada oo loo marayo qorshaheena Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Kaliya (BHSO). Ma heli doontid lacag-bixinno lacag bixin ah oo loogu talagalay adeegyada la daboolay ama laga oggolaaday bixiyeyaasha shabakadda.
Adeegyada khalkhalka isticmaalka maandooriyaha waxaa ka mid ah: Qiimaynta, sunta, adeegyada beddelka opiate, daaweynta bukaan jiifka, daaweynta bukaan socodka.
Adeegyada caafimaadka maskaxda waxaa ka mid ah: Qiimaynta, maaraynta dawooyinka, adeegyada xasilinta, daaweynta qoyska, adeegyada dhibaatooyinka.
Adeegyada kale waxaa ka mid ah: Adeegyada deg-degga ah, adeegyada isbitaalka, qiimeynta, adeegyada shaybaarka.
Wixii adeegyo badan oo BHSO daboolay, naga soo wac or fiiri buug-yaraha xubinta.
Si aad u codsato nuqul adag oo bilaash ah ee Buug-gacmeedka Xubinta, fadlan wac Adeegga Macaamiisha ee 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Waxaan kuu soo diri doonaa nuqul 5 maalmood oo shaqo gudahood markii aad codsato.
Miyaan ka heli doonaa kaarka Aqoonsiga Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington?
Markaad isqorto CHPW waxaa laguu soo diri doonaa kaarka Aqoonsiga. Kaarkaaga Aqoonsiga xubin ayaa kuu ogeysiinaya adeeg bixiyahaaga inuu biil ugu soo diro Community Health Plan ee Washington adeegyadaada.
Qof kasta oo qoyskaaga ka mid ah Qofka iska diiwaangeliya Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waxay heli doonaan kaarkooda aqoonsiga. Si gooni ah, Maamulka Daryeelka Caafimaadka (HCA) ayaa kuu soo diri doona kaadhka adeegyada ProviderOne si ay u tusiyaan inaad iska diiwaan galisay Apple Health (Medicaid).
Waxaad u baahan doontaa inaad muujiso kaarka Aqoonsiga Bulshada ee Qorshaha Caafimaadka ee Washington iyo kaadhkaaga adeega ProviderOne markasta oo aad hesho daryeel caafimaad. Taas waxaa ku jira booqashooyin caafimaad, booqashooyin takhasus leh, booqashooyinka caafimaadka dhimirka, booqashooyinka isbitaallada, iyo marka aad dalbanayso ama buuxinayso dawooyinka.
Maxaa dhacaya haddii lumiyo kaarkayga Aqoonsiga?
Haddii aad u baahan tahay cusub Kaarka Aqoonsiga CHPW laguu soo diray, fadlan soo wac CHPW Adeegga macaamiisha. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa oo ka daabacan kartaa kaarkaaga Aqoonsiga Xubinta ee CHPW khadka tooska ah adoo maraya bartayada bogga xubin.
Hadaad lumiso taada Kaarka adeegyada ProviderOne, fadlan soo wac Adeegga Macaamiisha Apple Health at 1-800-562-3022 raac tilmaamaha si aad u codsato kaadh cusub. Ama waxaad codsigaga ku soo gudbin kartaa onlayn addoo isticmaalaya Foomka xiriirka Apple Health iyada oo mawduuca "Kaarka Adeegyada" la doortay.
Haddii aad u baahan tahay daryeel oo aanad haysan kaadhkaaga adeega ProviderOne, u tag dhakhtarkaaga. Waxaa laga yaabaa inay awoodaan inay xaqiijiyaan inaad ku qoran tahay Apple Health magacaaga iyo taariikhda dhalashadaada.
Waa maxay baahi caafimaad ama daryeel caafimaad oo lagama maarmaan ah?
Gobolka Washington, baahida caafimaad waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo daryeelka taas oo ah macquul ah, lagama maarmaan ah, iyo / ama ku habboon oo ku saleysan heerarka caafimaad ee caddeynta ku saleysan ee daryeelka.
Gobollada kale waxay isticmaali karaan qeexitaanno kala duwan oo ah baahi caafimaad. Si aad u ogaato in daaweyn gaar ah ay buuxineyso heerka baahiyaha caafimaad, la hadal dhakhtarkaaga shabakadda CHPW ama daryeel bixiyahaaga.
Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno
Miyaadan helin jawaabta su'aashaada? Ma xiisaynaysaa inaad xubin ka noqoto? Kooxdayada Adeegga Macmiilka ee saaxiibtinimada leh ayaa ku faraxsan inay caawiyaan.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Diseembar 29, 2021